Sidee lamaanahaaga ugu soo ceshan karaa: talooyinka ugu fiican iyo milicsiga | Ragga Stylish
Sidee lamaanahaaga dib uguheli karaa
Kala tagista lammaanaha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee aan dhammaanteen soo wada marno xilli kasta oo nolosha ah. Gaar ahaan hadii qodobka jabintu aanu ahayn dhamaadka jacaylka. Xitaa haddii xiriirku dhammaado, maahan inuu noqdo dhammaadka. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo wax loo barto sida loo soo celiyo lamaanahaaga. Waa inaad fahamtaa inay jiraan xiriiro ay wanaagsan tahay in la joojiyo ama maxaa yeelay jacaylku wuu dhammaaday ama sababtoo ah sun badan ayaa jirta.
Si kastaba ha noqotee, haddii tani aysan ahayn sabab, joogso maxaa yeelay waxaan ku baran doonnaa sida loo soo celiyo lammaanahaaga.
2 Talooyin ku saabsan sida lamaanahaaga dib loogu soo celin lahaa
3 Sidee kusoo ceshan kartaa jaceylka lamaanahaaga
4 Fikradaha qaarkood
Burbur ka dib, qofku wuxuu rabi karaa inuu la heshiiyo lammaanihiisa. Xaaladdan oo kale, waxaa lagugula talinayaa in mid kastaaba waqti u qaato inuu ka fiirsado dareenkiisa. Hadday xaaladdan tahay, iyada oo loo marayo milicsiga iyo is-aqoon, waxaad ku soo gunaanaday inaad weli jacayl ku jirto, su'aasha ah sidee lammaanahaaga dib loogu soo ceshan karaa waxay bilaabaysaa inay udub dhexaad u noqoto noloshaada.
Sida aad ka arki karto khibradaada gaarka ah ee sheekadan jacaylka ah, hubin la'aantu waa qayb nolosha ka mid ah. Ma hubi kartid waxa ka dhici doona mustaqbalka adiga, laakiin waxaad isku dayi kartaa inaad ku dhaqanto rabitaankan dib-u-heshiisiinta qaab wada jir ah.
Talooyin ku saabsan sida lamaanahaaga dib loogu soo celin lahaa
Haddii shuruudaha kor ku xusan la buuxiyo oo aad rabto inaad barato sida dib loogu soo celiyo lamaanahaaga, halkan waxaan ku siineynaa talooyin.
Abuur xusuus cusub. Xaaladdan oo kale, khalad suurtagal ah ayaa ah inaad u isticmaasho waqtiga ka hor burburka xusuusin ahaan. Soo cesho saaxiibti hore ama saaxiibki hore Dib ugama laabanayso meeshii aad ka tagtay, laakiin waa iskudaya inaad hadda ka dib abuurto waddo cusub. Xusuus cusub oo ku xirnaan kara faahfaahinta iyo wada sheekaysiga.
Dulqaad yeelo. Qaybta kale waxay sidoo kale si cad u dooneysaa inay kula heshiiso, laakiin dhinaca kale ayaa sidoo kale shaki ka qabaa arrintaas. Sideed ugu badbaadin kartaa saaxiibtiinadii hore ama saaxiibki hore xaaladahan? Ka fogow dulqaad la'aanta. Tusaale ahaan, haddii aad ogaatay in khaladaadkaaga ay keeneen masaafada udhaxeysa xilligii burburka kadib, waxaad hadda khaladaadkan u rogi kartaa barasho si looga hortago inay mar kale dhacaan.
Iskuday inaad xiriir joogto ah la yeelatid waqtiga, laakiin bKu dheelitir dheelitirka si aad boos ugu hesho iyada si ay iyadu kuu dhaafto adiga oo u ogaato maqnaanshahaaga. Si aad u badbaadiso xiriir xumaaday, fiiro gaar ah u yeelo dadaalkaaga, laakiin sidoo kale fiirso jawaabta dhinaca kale. Hagaag, ka sakow rabitaankaaga inaad mar kale dhinaceeda noqoto, haddii ay dareento wax ka duwan, waa inaad aqbasho xaqiiqadan.
Waxaa jira wada hadal sugaya. Markaad rabto inaad la heshiiso aabbahaa hore, waxaad dareemi doontaa inay weli jiraan waxyaabo badan oo la muujiyo burburka ka dib. Haddii aad u baahato inaad kaqeybgaliso wada hadalkaaga qodobadan midkood, iskuday inaadan dib u dhigin wada hadalka maxaa yeelay waxaad ka baqeysaa in jawaabtiisa aysan noqon sidaad fileysay. Wadahadalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad cadeyso naftaada adoo balaarinaya fikradahaaga. Haddii aad ugu dambayntii go’aansato inaad dib u noqoto ama natiijooyinkaagu ay ka duwan yihiin, wadahadalka noocan ahi waa muhiim.
Ha isticmaalin masayrka. Ha isku dayin inaad ka masayrto qofkaagii hore dadka kale, adoo isku dayaya inaad si wanaaagsan ugu soo furato qofka aad hore u dhalatay adigoo ka maseyraya qof kale. Waqtigaaga u hibee kobaca gudaha oo muuji waxa ugu fiican naftaada. Ku noolow waqtiga xaadirka ah, ha ku xaddidin farxaddaada daqiiqadda ay mar kale kulmayaan, maxaa yeelay taasi way dhici kartaa, ama weligeed ma dhici doonto. Ku shaqeynta sidan, waqti ka dib, waad ku qanci doontaa dadaalka xilligan.
Sidee kusoo ceshan kartaa jaceylka lamaanahaaga
Waa hal shay in la barto sida loo soo cesho lamaanahaaga, waa shay kale inaad soo celiso jacaylka isla. Sidaan horayba u soo sheegay jacaylku wuu dhamaan karaa waana marka ay wax badan sii adkaadaan. Inaad dib uhesho jaceylka lamaanahaaga ayaa ka dhib badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira talooyin ku saabsan tan.
Ka dhig inay dareento inay iyadu tahay mudnaanta koowaad ee noloshaada. Sababo kala duwan awgood, qofku wuxuu dareemi karaa inay ku yar yihiin nolosha lamaanahiisa. Haddii aad rabto inaad dib u hesho jacaylkiisa, waxaa muhiim ah inaad u hurto hadiyaddaada ugu weyn: waqtigaaga. Waqtiga lagu cabiro tayada iyo tirada.
Muuji dareenkaaga. Waxaa jira siyaabo aan la soo koobi karin oo lagu muujiyo jacaylka. Tusaale ahaan, iyada oo loo marayo warqad jacayl ah. Laakiin sidoo kale waxaad ku muujin kartaa dareenkaaga adoo muujinaya falkan jacaylka ah. Erayo iyo ficillo badan oo muujiya ballantan ayaa kaa caawin kara inaad mar kale ugu soo dhowaato. Go'aannada waa in la sameeyaa, tanna, waxaa muhiim ah in laga fikiro waxa isbadelay dhexdiinna bilihii dhowaa iyo waxa dhaliyay kala tagga.
Waxaa la soo dersay howlo la saadaalin karo, Way fiicantahay in laqaado dadaalka xiriirka oo qorshooyin loo sameeyo labo qof. Waxqabadyadan waxay ku meeraysan karaan hiwaayadaha guud, safarada, socodka, filimada, muusikada, tiyaatarka, iyo fikradaha kale ee suurtogalka ah. Qorshaha wadahadalka ayaa si gaar ah muhiim ugu ah waqtigan. Muuji sida aad ujeceshahay qofka aad jeceshahay. Xitaa haddii aad tan horay u sameysay, jacaylka lagu muujiyey muujinta qaddarinta kuma daali doono salaaxiddan wanaagsan ee hodanka ah, taas oo kobcineysa isku-kalsoonaanta qofka aad jeceshahay.
Waa inaan maanka ku haynaa in waxaas oo dhami ay yihiin wax aad u adag waana inaan tixgelin siino si aan u ogaano waxa ay tahay inaadan sameyn:
Marka hore waa inaad naftaada u naxariisataa. Haddii sababta ugu weyn ee rabitaankan dib-u-heshiisiintu ay tahay cabsida kalinimada, waxaa muhiim ah in aan loo rogin qorshahan tijaabada ah hab looga takhaluso cabsidan.
Wixii dhacay yaan la iska indhatirin. Doonista inaad la joogto qof kale waxay ka dhigi kartaa hamigan inuu raadsado isla markiiba kulanka. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in lagu xoojiyo aasaaska marxaladan cusub wadahadal lagu xaliyo arrimaha aasaasiga ah ee u dhexeeya labada dhinac.
LXiriirku waa idinka labadiinaba. Laguguma talin in dad badani kaqeyb qaataan. Markaad lammaanahaaga lajoogtid, hadda waad ajnabi tahay xaaladduna waxay kaliya saamayn doontaa labadiinaba. In kasta oo aad saaxiibo wadaag tihiin, haddana haddii dheelitirka xiriirka illaa iyo hadda uu ahaa mid wanaagsan, iyagu ma ahan halyeeyada sheekadan laba qof.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto sida lamaanahaaga dib loogu heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sidee lamaanahaaga dib uguheli karaa
Sidee naag loo sasabaa
Sida loo jeesto haweeneyda